BBC Somali - Warar - Kenya oo qiratay duqaynta Kismaayo
Kenya oo qiratay duqaynta Kismaayo
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 4 September, 2012, 18:33 GMT 21:33 SGA
Kismaayo waa magaalada ugu weyn ee hadda ku hartay gacanta al-Shabaab
Afhayeenka u hadlay ciidanka Kenya, Kolonel Cyrus Oguna ayaa BBC u xaqiijiyay in ciidanka badda ee Kenya ay duqeeyeen magaalada Kismaayo. Waxa uu sheegay in ay qeyb ka tahay dagaalka lagu doonayo in lagu qabsado magaalada.
Dadka deggan magaalada Kismaayo, oo ay gacanta ku hayaan kooxda Islaamiga ee al-Shabaab ayaa BBC u sheegay in xalay magaalada laga soo duqeeyay dhinaca badda.
Dadka deggaanku waxay sheegeen in duqayntu ay ka timid maraakiib badda taagan.
Afhayeenka ciidamada Kenya, waxa uu ka gaabsaday xilliga ay ciidanka Kenya oo ka mid ah kuwa AMISOM ay geli doonaan magaalada.
Ciidamada militeriga ee Kenya ayaa isu diyaarinaya dagaal ay ku qaadaan magaalada.
Dadka magaalada ayaa sheegay in ay dhawr madfac ku soo dheceen dekedda iyo garoonka dayaaradaha ee magaalada.
Dhinaca kale waxaa jira warar sheegaya in al-Shabaab ay dib isku qabanqaabinayaan si ay u difaacaan magaalada Kismaayo.